Kedu ka m ga - esi kpọtụrụ onye isi nke Peloton? - Okirikiri
Isi > Okirikiri > Peloton okirikiri ceo - ịchọta ihe ngwọta
Peloton okirikiri ceo - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ka m ga - esi kpọtụrụ onye isi nke Peloton?
Azịza 1:nọmba ekwentịmakaPọọtọCycle bụ (646) 277-4497. Ajụjụ 2: isnye bụOnye isi oche nke PelotonOkirikiri? Azịza 2:Onye isi oche nke PelotonCycle bụ John Foley.
NA-ENWERE Ọ B OR Ọ B OR ỌB ORR OR ORLỌ AKA? >> Anyị ahụwo ụlọ ọrụ na-abịakwute anyị, anyị nwere ọkwa maka ndị ọrụ iji PELON NA-AKW WKWỌ AKW WKWỌ AKW WITHKWỌ AKW WITHKWỌ NA SAMSUNG Ọ B ORR OR MA Ọ B WER WE DB ADRIR IRLỌ N'ASLỌ N'YOULỌ N'YOULỌ AH - - UMUAKA, MA AHUIKE NA AHUIWU - D ASKA NKWUKWU NDAD ỌD ASD AS NA-AHF AKWERKWỌ ND OF NA-EGO. >> G DON DO KA FEARYOUR-afọ ndị ahịa na-aghọ A zuru ezu ahịa. >> Echere m na ndị ahịa a na-eme ihe karịrị oge 20 Otu ọnwa ka anyị wee tinye ihe kachasị elu na ya.
Ndị ahịa dị ugbu a na-ahụ uru dị ukwuu, ekwere m na ha ghọtara mgbe onye ọrụ ọrụ dị njikere ime nkwupụta ọ bụla dị njikere ime, oge a na-amalite na anyị ọ bụ ezigbo mma na ị dị njikere ịkwụ ụgwọ anyị 5, maka ụfọdụ 4 nde ndị a. NA ANY WE NA-ECHE NA WILL GA-EBU ND M NDSE A, ỌZỌ NA P PETA ANY WE chere na ị ga-anabata nke a. >> ANA-AJUJU AJOWJ H ND H AHOW NA-AH GR NA-AH WILL NA-AH L NA-AH L NDHEN AH W NA-AH THE MGBE ND THE AHHENR R RBURNR CAN CAN Nwere ike ịgwa anyị na gịnị ka ị na-ekwu na ndị na-achọpụta ihe na-echebara echiche ma ọ bụrụ na anyị na-eme nke ọma. Ebe mara mma na obodo mara mma. ANYI NA-ETO O digi ato tupu ntuputa.
ANY SE NA-AH PR ỌR PR NA-eto eto anyị site na nke atọ otú anyị si ele anya n'ọdịnihu, nke a ga-abụ otu n'ime afọ ndị kachasị mma na mmemme ọhụụ. ANY HAVE nwere chanel ọhụụ, ỌH GRH NEW ỌH NEWR L ỌH LR L NKE DN KA CORPORATE-ROBUST, BNGH SU EZU-ROBUST-WELLNESSAND RETAIL STORES, BUTTEE OGRAPHIC, NA PELOTON NWERE ỌT OFT OF ỌT GRTARA, NA ANY HAVE NA-EC NEGHED ECHICHE KWES FORR FOR. >> IHE KWES OFR OF NT OFTA NT TOL TO AKW DOKWỌ NA-EME BILỌ NT BIR I N'TSLỌ N'CONLỌ N',LỌ NCHE A, N'CONLỌ NT THETA NT RTA NKE NT TR OR MA Ọ B FL N'FLLỌ AKW ,KWỌ, Ọ B IFR AN na mmadụ ọ bụla nọ na ụzọ niile kachasị mma> Nke a bụ nnukwu ajụjụ. Afọ anọ gara aga, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% na-agbagha, ugbu a anyị anaghị agbaji ya, MA Ọ B L Ọ BOT Ọ B, Ọ B,, Ọ BARA, Ebe anyị gbakwunyere ọtụtụ - Ntugharị uche, na-agbasi mbọ ike, na-aga n'ihu na ngwa ngwa na-eto eto.
D WE KA ANY L NA-ACH AT AKW THEKWỌ AKW SEKWỌ AH SE, MGBE ANYD NA-EME N'WILLLỌ GA-EBU EGO buru ibu na mmiri
Gịnị bụ ụgbụ John Foley bara uru?
AtụmatụNet WorthnkeJọnPaulFoleydịkarịa ala $ 120 Nde dollar site na 15 June 2021. Maazị.Foleynwere ihe karịrị 100,000 nkeji nke ngwaahịa Peloton Interactive Inckwesịrịihe karịrị $ 12,160,000 na afọ ole na ole gara aga ọ rere ngwaahịa PTONkwesịrịkarịrị $ 96,868,000.06.17.2021
Site na nwa kpakpando gaa na akara ngosi, ndụ Janet Jackson juputara na oge omume, na mgbakwunye na ọrụ egwu dị egwu nke na-eme njem njem kpakpando a na ụlọ ọrụ ọ bụla dị oke egwu. Ka anyị lelee mgbanwe dị egwu Janet Jackson. Janet Jackson banyere ndabara ụwa na ndabara ma ọ masịrị ya ma ọ masịghị ya.
Brothersmụnne ya nwoke malitere ọrụ ha dị ka The Jackson 5 laa azụ na 1965, otu afọ tupu amụọ ya. Dị ka e kwuru na ya BBC akwụkwọ 'Inweta Control' mgbe Janet bụ 5 afọ, ụmụnne ya ndị na-ama ama kụrụ anọ # 1 kpọrọ na US Billboard Hot 100, bịanyere aka a ndekọ ndekọ na Motown, ma nwee nke ha katuunu telivishọn usoro. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, Janet gbasoro nzọụkwụ ụmụnne ya ma sonye na The. na usoro ihe omume dị iche iche nke Jackson.
Ọ bịakwara na nwunye nke Carol Burnett Show na nwanne ya nwoke nke okenye Randy Jackson. Dika o chetara n'akwukwo a, obere oru ya mere ka ndi oru telivishọn, umm, na onye edemede Norman Lear, huru ikike ya dika onye na-eme ihe nkiri na ntaneti ma tinye Heras Penny na CBS sitcom Good Times. Tupu ọrụ egwu egwu ya, Janet kụrụ Jackson dịka nwatakịrị na-eme egwuregwu na Good Times.
Ọ bụ ezie na Jackson malitere ihe nkiri na ihe nkiri ahụ mgbe ọ dị naanị afọ iri na otu, o chere na ọdịdị ya ezughi oke. N'ajụjụ ọnụ nke 2012 na Anderson Live, ọ tụgharịrị uche n'oge ya na sitcom a ma ama, nke na-abụghị ezigbo ahụmịhe oge niile. Jackson kọwara na ọ malitere n'oge na-adịghị anya na ụmụ nwanyị na-ahụ maka ebe nchekwa ya gwara ya ka o kee obi ya.
Tupu ịmalite ihe nkiri na-esote oge, a gwara ya na ọ kwesịrị ibutu ibu. Joe Jackson agakwaghị abụ onye njikwa ya, nna ochie nke ezinụlọ egwu jiri oge ya jikwaa Janet Jackson. Mgbe ọ dị afọ iri na isii, Janet Jackson wepụtara onwe ya akpọpụtara album izizi akpọghị ohere iji gbakwunye ọtụtụ ụda na 1982 ma edeelarị egwu ndị ahụ.
Dabere na Billboard, LP ruru nọmba 63 na US Billboard 200 ma ghara ime mkpọtụ dị ukwuu. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, Janet wepụtara album ya nke abụọ, Dream Street, nke nwekwara ọtụtụ mmetụta. Mgbe album ya abụọ mbụ gasịrị, Janet Jackson kpebisiri ike ikpebi ihe ọ ga-eme.
Mgbe ọ kwagara Minneapolis, o dekọrọ album album nke atọ ya, Control, ya na ndị na-eme ihe nkiri Jimmy Jam na Terry Lewis. nke mechara bụrụ mkpebi amamihe dị na ya. E wepụtara njikwa na 1986 ma bụrụ nnukwu egwu.
Dịka e kwuru na Inweta Inweta, ọ bụ oge mbụ ndị Fans nụrụ ka Janet dere ma dee abụ sitere na ụwa nke ya, ahụmịhe nke onwe. Ihe ndekọ ahụ riri elu na # 1 na chaatị US Billboard 200, na-ewepụta mmadụ ise kachasị elu 5 na abụba mbụ ha na # 1, 'Mgbe m chere banyere gị'. Njikwa emeela ka ọrụ Janet gaa ebe dị elu ma nwee ihe ịga nke ọma n'ụwa niile.
Ọbụghị naanị na ọba egwu ahụ gosipụtara egwu ya n'ihu ndị na-ege ntị gburugburu ụwa, mana ọ Fi N'ikpeazụ, a malitere ịkwanyere ugwu dị ka onye egwu na aka ya. Njikwa bụ Janet Jackson bụ ihe ịga nke ọma na album ma ọ bụghị gimmick. Mgbe a bịara na ntọhapụ nke album studio ọzọ, Jackson maara na ọ ga-ebuli egwuregwu ya iji gosipụta na ọ bụghị otu album.
Na 1989, Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 kwadoro ọnọdụ Janet dị ka akara ngosi pop, na-enyere ya aka idebe na imebi ndekọ ọ nweghị ndị ọzọ na-ese ihe rụzuru, naanị album dị na akụkọ ntolite iji kụọ mmadụ asaa na 5 kacha elu na eserese Hot 100, ma nyere ya aka bụrụ nwanyị mbụ na-ese ihe iji họpụta maka Onye Mmepụta Afọ na 1990 Grammy Awards maka ịmepụta nọmba 1 kụrụ na eserese Hot 100 na afọ atọ dị iche iche. Mgbe ndị njikwa ndekọ nwetara nnukwu akara na njikwa na Janet Jackson's Rhythm Nation na 1814, ndị nchịkwa ndekọ na-akpọsi mkpu ike ka Janet Jackson bịanye aka na aha ya. Agụrụ ya ka ọ na-ejide njikwa, emechiri azụmahịa ya na A&M Records, na-eweta Janet na $ 40 nde na 1991 US dollar nke ejiri akara Richard Branson's Virgin Records - nkwekọrịta kachasị na akụkọ ihe mere eme n'oge ahụ.
Dịka ọ kọwara na akwụkwọ akụkọ - emesịa ọ gafere, mana na 1996, Janet gbatịrị nkwekọrịta ya na Virgin maka $ 80 nde, na-edebanye aha ahịa kachasị na akụkọ ihe mere eme nke ugboro abụọ. N'ajụjụ ọnụ 1997 gbara Giselle Fernández, a jụrụ Janet ihe ọ dị ya ka ọ bụrụ onye na-eme ihe nkiri kacha akwụ ụgwọ n'ụwa ma kwuo, sị, 'Anaghị m eche maka ịbụ onye kachasị akwụ ụgwọ. Mgbe emechara ihe ahụ, ọ ka mere ya.
Anọgidere m na ndụ m dị ka m na-eme. 'Janet si 1993. hụrụ Janet Jackson ka ọ na-emegharị ihe onyonyo ya ọzọ.
Oge a ka ọ dị njikere igosi akụkụ sexy ya. Jackson goro onye okike na-ese foto a ma ama bu Patrick Demarchelier ka o gbaa ihe nkpuchi album ahu nke LP, nke Jackson bu onye nwere oke onu, ara nke aka nke di ya, René Elizondo kpuchiri. Akara gị na die zeit du Foto a dị egwu.
Dika okwuru na akwukwo ihe omuma nke BBC 'Inweta ikike', 'Nke ahu kwesiri ibu ihe mkpuchi. Ya mere ekwuru m OK, nke ahụ dị mma, ejirila ya na mkpuchi album. Ka anyị jiri ya maka akwụkwọ akụkọ.
Kama, anyị gara Rolling Stone ma ha hụrụ ya n'anya. ”Jackson enweghị nsogbu n’ememe mmekọahụ nke ya. Okwu nke onye na-eti egwu na-elekwasị anya n'agụụ mmekọahụ na agụụ mmekọahụ ya n'ọtụtụ abụ na 1990s na 2000s.
A duet n'etiti Janet Jackson na ya King of Pop nwanne Michael Jackson bịara ogologo oge. N’afọ 1995, nnukwu kpakpando abụọ gbakọtara wee wepụta otu ‘Scream’. Forbes na ihe karịrị nde 64 na-ege ntị iji hụ isiokwu premiere.
N'afọ sochirinụ, Janet na Michael meriri Best Short Video Video na Grammy Awards ma jide MTV Video Music Awards atọ. Maka ndị Fans Janet Jackson, ọ bụghị ihe nzuzo na ọ bụ onye nzuzo. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya ịmata na ọ lụrụ onye na-agba egwu Mexico na nzuzo, onye na-ede abụ na onye nduzi René Elizondo, bụ onye duziri isiokwu egwu ya maka 'Nke ahụ bụ Lovezọ Lovehụnanya Na-aga' na 'Ọzọ' n'ụlọ na March 1991 North San Diego County kegide eriri.
Otú ọ dị, ha mechara daa ma maa ọkwa na ha ga-agba alụkwaghịm mgbe ha lụsịrị ihe dị ka afọ itoolu. Elizondo kwuru E! Na 2000 anyị dịpụrụ iche, ndị azụmaahịa na ndị mmekọ karịa ndị hụrụ ya n'anya. 'Na mkparịta ụka mkparịta ụka 2000 niile na Matt Lauer na Taa, Jackson kwetara na ọ gwara ndị enyi na ndị ezinụlọ ole na ole gbasara alụmdi na nwunye ya nke abụọ, naanị ndị ọ kwenyere ga-edebe ihe nzuzo ahụ.
Janet Jacksons 2004 A na-edekọ arụmọrụ Super Bowl nke ọma na afọ ole na ole wee bụrụ isiokwu na-ekpo ọkụ. Jackson rụrụ n'oge ngosipụta nke ọkara wee kpọọ ya na Justin Timberlake na ya na ogbo. Na njedebe nke ntọala ha, Timberlake dọwara uwe ha nke ukwuu, na-ekpughe ha dị ka ụta dị ilu.
Fọdụ ndị kwenyere na ọ bụ ọkwa ọha na eze ebe ndị ọzọ kwenyere na ọ bụ ihe mberede. Mgbe ihe merenụ gasịrị, ọrụ otu onye nke Timberlake gara n'ihu, ebe Jackson doro anya isiokwu ya na ndị otu ya ka edepụtara aha ha na netwọkụ telivishọn niile na ụlọ ọrụ redio Clear Channel Communications, gụnyere MTV, dị ka Billboard si kwuo. N'oge ngosi na Oprah Winfrey Show, Jackson kwuru na ọ kwara ụta maka ịrịọ mgbaghara maka ihe na-emeghị na ebumnuche.
Ihe ngosi vidiyo gara wee kwupụta, 'Mgbe YouTube bidoro ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, na-ekele akụkụ nke ndị na-achọ obere vidiyo nke arụmọrụ Janet na Justin. 'Lute! Akụkọ, Janet Jackson zutere di ya nke atọ, Wissam Al Mana, na Eprel 2010. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ha abụọ kekọtara eriri ha na nnọkọ nzuzo.
Otú ọ dị, Jackson agwaghị ndị Fans ruo n'afọ na-eso ya, kama nke ahụ, ọ kesara nkwupụta nkwonkwo na weebụsaịtị ha na-asị, 'Asịrị agbamakwụkwọ nke oke oriri abụghị eziokwu. N'afọ gara aga, anyị lụrụ n'ememe dị jụụ, nke onwe na nke mara mma. 'N'April 2016, Jackson bipụtara akụkọ iji kwupụta na ya na Al Mana na-atụ anya nwa ha mbụ.
Ndị duo ahụ nabatara nwa nwoke bụ Eissa Al Mana na Jenụwarị 2017. Ọnwa atọ ka e mesịrị, Jackson na di ya kwupụtara na ha na-agba alụkwaghịm mgbe ha lụrụla afọ ise. E nwere oge mgbe ndị Janet Jackson Fans na-eche ma ọ ga-alaghachi na egwu ọzọ.
Mgbe ọtụtụ afọ nke enweghị ọrụ site na egwu egwu, onye ọbụ abụ nyere onye ọ bụla ọkwa ha ga na-eche mgbe ọ kwupụtara na ọ ga-alaghachi na 2015 site na album studio ọhụrụ na njem ụwa. Janet weputara album studio nke iri na otu, nke anaghi akari, n’ime onwa iri n’onwa n’aho, ya na Missy Elliott na J. Cole na aru oru.
Ọ bụ mbupute ha izizi kemgbe Discipline na 2008 wee nata nkatọ dị oke egwu site na ndị nkatọ egwu. Dị ka e kwuru na Entertainment Weekly, ọba ahụ ghọrọ akara ngosi nke asaa ya na US Billboard 200. Na mgbakwunye, Janet ghọrọ nwanyị nke atọ na-ese ihe nwere egwu # 1 n'ime afọ iri anọ gara aga.
Mgbe ọrụ dị ogologo, nke ọma, na nke na-agba ume, oge eruola ka Janet Jackson banye na Rock & Roll Hall of Fame. N’ọnwa Machị 2019, onye ọrụ ọlụ egwu a bụ Janelle Monae matara ịrụsi ọrụ ike nke ihe ịtụnanya kemgbe ọtụtụ iri afọ site n’okwu ya: “Akụkọ a ezuchabeghị ma ọ bụrụ na ịnweghị, Janet. Ya mere, anyị na-akpọ isi ala nye ebe ịchụàjà gị n'abalị a. ”Jackson kwuru ihu ọma na obi nwayọ ma sị, 'Dị ka onye ọdụdụ n'ime ezinụlọ, ekpebisiri m ike ịga naanị m.
Achọrọ m iji ụkwụ m abụọ guzoro. Ma ọ dịbeghị n'ime otu nde afọ m ga-atụ anya ịgbaso nzọụkwụ ha. N'abalị a, nwanne gị nwanyị nke nta mere ya. 'Na February 2019, Jan et Jackson kwupụtara ebe obibi mbụ ha na Las Vegas,' Metamorphosis '.
Emere ihe nkiri ndị a na Park aterlọ ihe nkiri na Park MGM Resort wee gbara ọsọ site na Mee 2019 ruo Ọgọstụ nke otu afọ ahụ ọtụtụ n'ime ha, dị ka NME si kwuo, mana o bulitere ego ahụ n'ezie. O welitere nde $ 13 site na ihe ngosi 18, dị ka Billboard si kwuo. Na February 10, 2020, Janet Jackson kwupụtara site na Instagram na ya ga-ewepụta ọba ọhụụ akpọrọ 'Black Diamond', nke a ga-akwalite na njem ụwa. Enwebeghị 'Black Diamond' maka edemede a ma kagbuo njegharị ya n'ihi na ejidere ọrịa ọrịa coronavirus zuru ụwa ọnụ, ma ka ndị Fans na-echere egwu ọhụrụ ka ha bịa, ha nwere ike ịtụ anya na akụkụ abụọ ha ederede n'ihi ikuku na A&E na ndụ na 2022.
Onye na-abụ abụ nke onwe ya ga-ekwu maka ọnwụ nna ya bụ Joe Jackson na nwanne ya nwoke nke okenye Michael Jackson ma kesaa akụkụ nke akụkọ ahụ banyere ọrụ Super Bowl 2004. Lelee otu n'ime ihe ọhụụ ọhụrụ anyị ebe a! Soro Shorten ọbụna karịa akụkọ Nicki Swift gbasara ndị egwu egwu ama ama kachasị amasị gị.
Ego ole ka ndị nkuzi peloton na-eme?
Otuonye nkuziafọ gara aga nwetara ụgwọ ọnwa isii na onyinye ego. More-agadindị nkụzi na-emeihe karịrị $ 500,000 na ngụkọta ụgwọ, na-ekwu na ndị maara ụlọ ọrụ ahụ anaghị agụta ego ha nwere ikeimesite na nkwado ndị ọzọ.02.07.2021
DAALỤ. >> UGBU A ANY MOV NA-EME IHU N’ ONLỌ NCHE A B WHO ONYE B IS ỌZỌ ỌZỌ NA-ADARGHAR EGO NA-EJI ỌZỌ D TO ICHE ICHE NA-ENYERE KWESORO KWURU. >> OZI NA EZI OZI OMA, EBERE NA-EBU AH PHA AHY NA ND H HOUSTON. >> Ndewo.
KEDU NKE NA-EME? H-OBODO. Ọ D GO MMA BEB H Ebe a. AKURKỌ: EH EGO M, ỌR WEA KWES EXR EX KWES YOUR YOU KWES YOUR H Gị N'ebe a na anyị ga-enwe SHAN.
SPOTLUG KWURU N'IHI NA NDI HA NIGERIANDERS toro na KATY NA NA-EGO NA TAYLOR na ebe obula ha gara, ebe obula ha biara. >> Kwa Gbaa ịnyịnya na H obodo ikwu onye ọ bụla na LEADERBOARD na HOTELLOV enyi ndị buru ibu FANS unu na-ewetara unu nkuzi mara na unu afọ 12 afọ dị ka a ọkachamara Artist na LA, MA B na-aga New York City D AKA ỌHRR AND ANDB ANDR YOU NA YOU B SO N'SOLỌ N'AFỌ nke abụọ gị dị mma na ọrụ a na ndị ọzọ na-eche na ị ga-eme nke a kọwaa anyị otu ahụmahụ a bụ maka gị Ọ bụrụ na ị maara ndụ ndụ, ebe n'etiti na ugbu a na m ghọrọ na-arụsi ọrụ ike wee hụ ya n'anya AHOD KA Ọ NA-EME NKE B THE ỌH OFR OF NKE NDIFE TO GA-EME THELỌ NỌM AND NA-Eweta NT THETA. >> Echere m na Ọ B THAT NA YOUB YOUR YOU SP NA-EKWU ỌT MANYT LE AH OF ỌR FA NA AKA NA-AKA Ọ B D Mkpa N’oge Ọrịa Na-efe Ọrịa Anyị Bụrụ n’ ANDlọ na ebe ọ pụtara inweta mmadụ kwụsịrị akwụkwọ nri ahụ ma na-aga ije, ọ dị mma ọ bụghị naanị ahụ ọma ụmụ agbọghọ ka. Obi ụtọ na-eme ya.
EKPERE. EKPERE. EKPERE.
Echere m ihe kachasị mma, nke a bụ ihe pụrụ iche banyere oge a na nke ahụ, ọkachasị ndị mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ na-agagharị, n'ihi na oge na nkà ha na ugbu a mkpa nke njikọ ndị a na-achọta n'ụlọ ha, ị nwekwara nghọta dị mkpa, wee chọta. Ọ B,, MFE TOM ALTA Ọ ỌZỌ, NKP MODR YOUR Gị B IS ỌR THE IGB ANDR AND NA ACEB FORR SP NKE AK THERIR MMIRỌ KA Ọ B THAT B THAT ỌBIG. Mgba aka gị megide FLUKIER Oge siri ike NA UGBU A KWESOWR THAT KWES THATR THAT KWES THATR THAT KWES LR L KWESAYR L KWES .R. KWES .R.. P CANR RE ACB literallyR literally KWES literallyRO KWES OFR OF KWURU
YOU mara na m na-aga ije na onye ọ bụla nwere ebe a ma na njedebe nke ụbọchị ahụ, ị ​​ga-enweta slled na nnukwu ọrụ ma bụrụ ihe ijuanya na ị nwetara nke a na 20 AHE AH EX AH GO NA-ATA. YOU ga-ere ahịa dị iche iche site na ya na ọ gaghị abụ ihe ịtụnanya iji nweta ihe ọ bụla, m na-eme atụmatụ ma ọ bụ mepụta mmemme nke klaasị ma na-eme atụmatụ egwuregwu ndị egwuregwu na ọ bụ akụkọ niile na ịhapụ gị ụlọ ị ga-ahapụ ịhapụ anụ ahụ na nke ọma I na-amalite. ONE BONE NA NKP INRSP N'IME NKE US.
H THER THE UNWA N’ỌMOTMOT. Ọ na-amasị m ịnọdụ ala na azụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na m na-eme nke a ma tụfuo azụ azụ adịghị eme ya n'ụzọ ziri ezi unu ụmụ agbọghọ. M DI NA EBERE.
Gee ntị mgbe ị laghachitere na obodo TOWNIN H KA KA ANY ME ZUP FORTA CHIPAND SALSA NA QUESO 'B PL PLLỌ D TO N’ TOLỌ NT ALỌ AKW LKWỌ NKE ELU QUESO. EE. UBỌCH Q QUESO MGBE M nọ na HOUSTON.
DAALỤ. >> AXLEY. MA HAM PI BU IRBỌCHIR. >> Daalụ. >> Daalụ.
AKURKỌ: Ọ B ON NA SATDD.
Olee otu i si ebi nkata na peloton?
Iji malite aikori, sonye otu ịnyịnya ahụ gị na enyi gị wee gbadaa ma chọta enyi gị na Onye ndu. Họrọ aha ha ma pịa bọtịnụ okwu iji rịọ aikori.
Peloton enwere nsogbu ego?
Ọdachi a kachasị ọhụrụ dị n'elu ihe egwu ahụPọọtọihu site na imeghe gyms gafee U.S. Ma ihe kariri 3x n’afọ gara aga,Peloton si~ 5x na-enweta ego buru ibu ka bara ọgaranya maka ngwaahịa na ~ 40% oke oke.
Afọ ole bụ John Foley M&G?
Afọ 59-ochiesonyeereM&Gosisi dị ka onyeisi oche tupu ya demer siNkwado, nke mkpuchi ahụ, na Ọktọba 2019, na-ekepụta standalone edepụtara ego ego Britain na Europe na azụmaahịa.
Whonye bụ onye nkuzi peloton kachasị mma?
Ọ bụrụ na anyị gwara gị Alex si atụ ogho klas dị mfe anyị ga-agha ụgha. Senioronye nkuzina nwa afọ Hamptons, Alex Toussaint agbagola ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụike na-akụzi klas 10 n'izu nke KWES sellR sell na-ere na sekọnd.
Ndi nkuzi peloton nwere ike ihu gi?
Ee, ihuenyo naPọọtọigwe kwụ otu ebe na ebe nzọ nwere igwefoto vidiyo! Ọ dị n'elu etiti ihuenyo ahụ. Agbanyeghị, anaghị eji ya makandị nkụzikahụzie gị. Kama, igwefoto vidiyo na-enye oheregịka video nkata na ndị enyi n'oge na-agba ịnyịnya.08/14/2020
Kedu ihe na-eme peloton?
Pọọtọmara ọkwa na Wednesday afọ ofufo na-echeta ma Tread + na Tread igwe eji eme ihe banyere nchekwa. Ụlọ ọrụ ahụbuna-adụ ndị ahịa nwere ngwaahịa ndị ahụ ọdụ ka ha kwụsị iji ya ozugbo ma kpọtụrụ haPọọtọmaka nkwụghachi zuru ezu.5 2021.
Peloton dị mma karịa SoulCycle?
Igwe igwe kwụ otu ebe bụ nnukwu nhọrọ maka mgbatị ahụ ị na-arụ n’ụlọ. Ọ na-abịakwute ihe ị masịrị na klaasị gị. Ọ bụrụ na ị bụ uchuMkpụrụ obionye na-agba,Pọọtọanaghị abịa nso. Mana ọ bụrụ na ịchọghị mkpụrụ obi,mgbe ahụ Pelotonbụ nnukwu nhọrọ.25. 2020.
Onye bu nchoputa na onye isi oche nke peloton?
CEO, Co-guzobere na Onye isi oche nke Board of Directors John Foley bụ nchoputa na CEO nke Peloton na-eje ozi dị ka onyeisi oche nke anyị board of Directors ebe April 2015. Dị ka onye na-anụ ọkụ n'obi na-agba ígwè na boutique mma riri ahụ, Foley leveired ya tech na azụmahịa Ahụmahụ iji mepụta Peloton, nke kachasị nwee mmekọrịta ahụike n'ụwa.
Ole ndị bụ ndị nkuzi nke igwe kwụ otu ebe na Peloton?
Ndị nkuzi ahụike ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere Robin Arzon, Ally Love, Alex Toussaint na Jess King bụzị ndị ama ama. Peloton anyịnya igwe dị na United States, United Kingdom, Germany, na akụkụ nke Canada, na mgbasawanye na Australia na-eme atụmatụ maka 2021.
Ego ole ka igwe igwe Peloton na-eri kwa ọnwa?
Ọ tụlekwara atụmatụ iji mee igwe kwụ otu ebe nke ụlọ ọrụ, nke na-ere $ 2,245, ma ọ bụ $ 58 kwa ọnwa maka ọnwa 39 na atụmatụ ịkwụ ụgwọ enweghị ọmụrụ nwa, ka ọnụ ala.